IUCN World Conservation Congress: Nyowani Sustainable Chiito
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » IUCN World Conservation Congress: Nyowani Sustainable Chiito
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Trending Now
Mutungamiriri weFrance Macron achitaura kuvhura IUCN Congress
Sangano reInternational Union for the Conservation of Nature (IUCN) rakaputira quadrennial World Conservation Congress svondo rino - gore rakatevera kupfuura pakutanga zvaida nekuda kwedambudziko re COVID-19.
Yakanga iri yakazara uye inobudirira ajenda yeiyo 9-zuva reInternational Union yeMusangano wekuchengetedza Kwezvisikwa wakaitirwa kuMarseille, France.
Paive nemisangano mina yakaitika panguva ino, nechinangwa chekusimudzira nekusimbisa.
Misangano mina yakapihwa yaive ye: Indigenous Peoples 'Summit, Global Youth Summit, iyo CEO Summit, uye Local Action Summit.
Mukufamba kwemusangano wemazuva gumi nemapfumbamwe, nhengo dzeIUCN dzakavhota pamakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nesarudzo hutungamiri hutsva, uye vakabvumidza inotevera IUCN chirongwa che2021-2024, icho chinodaidzwa Zvisikwa 2030: Kubatana Mukuita. Munguva iyoyo, zvakare, ina dzakasiyana masongiti akaitika - iyo Indigenous Peoples 'Summit, ivo Global Vechidiki Summit, ivo CEO Summit, uye iyo Yemunharaunda Yekuita Summit, zvese zvine chinangwa chekukurudzira nekusimbisa iwo akasiyana mapoka IUCN anoshanda nawo.
EcoGo yakauya kumusangano ichitsigira 3 mafambisirwo - Motion 003 - Kugadza Climate Change Commission (kana Kugadzira Global IUCN Climate Crisis Action Platform) kubva kuHawai'i Conservation Alliance Foundation uye Yedu Inonyura Manzwi; Motion 101 - Kuisa nzvimbo-yakavakirwa kuchengetedza zvinangwa zvichibva pane humbowo hwehunhu uye vanhu vanoda kubudirira, inotsigirwa neiyo WILD Foundation uye Yellowstone kuYukon Conservation Initiative; uye Motion 130 - Kusimbisa chinzvimbo chekushanya chakasimba mukuchengetedza biodiversity uye kugadzikana kwenharaunda, zvakataurwa neWCPA's (komisheni iri mukati meIUCN) Tourism uye Protected Areas Specialist Group. Ose akapfuura, sezvingaonekwa ne mavhoti anobuda.
Pamela kuAix en Provence
Chirevo 130 chinogadzira kugadzira Sustainable Tourism semusoro wenyaya uye kusanganisa zviitiko zvakasarudzika zvekushanya uye zviitiko mumisangano yenguva yemberi yeCongress uye IUCN, inodaidzira kuumbwa kweboka rinoshanda pakati-komisheni rinotarisana nebasa rekushanya rakachengetedza mukuchengetedza biodiversity uye kusimba kwenharaunda, uye inokurudzira mamwe makomisheni anosanganisira kushanya kwakasimba mukuyedza kwavo mune ramangwana. WCPA nevose vanobatsirana navo vakafadzwa nekuda kweizvi.
Kufambisa 101 yakanga iri nguva yakareba mukugadzirwa, uye yapfuura nekutenda kushingirira kwaVance Martin nechikwata chake. Sezvo Shanduko yemamiriro ekunze inotyaira mhedzisiro yekuita, aya ndiwo marondedzero anodikanwa kuchengetedza hunhu - kiyi yekupona.
Jehoshua Shapiro, Jessica Hughes, naPamela Lanier pakudya kwemanheru kweCEC
Motion 003 yakakwikwidzwa zvikuru. Vatsigiri vacho vaida kuti Climate Change Commission igadzirwe, asi mukudzokororwa neboka rekuongorora reIUCN, mutauro wakashandurwa kuti uve neboka revashandi, pane kuita komisheni. Verenga "Yedu Inonyudza Manzwi" mhinduro kune iyo shanduko pano. kuti mutauro wakashandurwa pasi pekumwe kudzokororwa kuita "Kugadza Global IUCN Yemamiriro ekunze Crisis Action Platform" kana kugadzira Commission. Kufamba uku kwakapfuura mudare rechisere uye yekupedzisira gakava uye vhoti yemusangano, kunyangwe chimiro chachaizotora hachisati chazivikanwa.
IUCN yakabvumawo pane a new manifesto kwenguva inotevera yemakore mana nekutarisa ku COVID-19 kudzoreredza nekumisa kurasikirwa kwezvisikwa.